Raikitra ny Fitsapa-Kevi-Bahoaka ao Torkia. Inona no Mety Hiova? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Avrily 2017 13:08 GMT
Erdogan. Pixabay image. Azon'ny rehetra ampiasaina.
Fito taona lasa izay no nisy fitsapa-kevi-bahoaka farany tao Torkia, ary nekena avokoa ny fanovana rehetra. Androany no fitsapa-kevi-bahoaka fahafito teo amin'ny tantarany, fa misara-kevitra kokoa ny firenena no betsaka ihany ny haza.
Nanamafy ny fahefany manokana, nanaisotra ny mpanamarina sy ny mpifaninana tao an-dapa sy ny governemanta ary nampihatra ny famoretana tsy mbola nisy toy izany teo amin'ny seha-bahoaka rehetra taorian'ny fanongama-panjakana tsy nahomby tamin'ny jolay tamin'ny herintaona ny filoha Recep Tayyip Erdogan, izay politisiana niavaka indrindra tao anatin'ny 15 taona farany.
Ary ho an'ny Tiorka handrotsaka ny ‘Eny’ rahampitso, Erdogan ilay lehilahy namerina tsimoramora ny fahefana miaramila amin'ny politika ao an-toerana, mpiaro ny Miozolomana mpivavaka ary tavan'ilay marika ‘Torkia Vaovao’ nolazainy tamin'ny taona 2014.
Ny mpanohitra azy kosa mahita ny fandresen'ny ‘Eny’ amin'ny fitsapa-kevi-bahoaka rahampitso ho fikorontanana amin'ny lafiny rehetra.
Inona ny miova?
Araka ny volavolam-panitsiana miisa 18 ao amin'ny lalampanorenana, raha mandresy ny ‘Eny’, dia manaisotra ny satan'ny repoblika parlemantera i Torkia ary mizotra mankany amin'ny fiadidiana ny filoham-pirenena mpanatanteraka [matanjaka]. Ho afaka ny hifaninana ho filoham-pirenena ny Filoha Erdogan amin'ny taona 2019, ary raha voafidy dia mety ho eo amin'ny fahefana mandra-pahatonga ny taona 2029.
Ny fanovana ihany koa dia manome zo ny filoha handrava ny parlemanta; manendry ny minisitra sy manampahefana ambony –
tsy mila fanamarinana mialoha — ary ny atsasaky ny mpitsara ambony.
Manan-jò ihany koa ny filoha hiantso fitsapa-kevi-bahoaka, hanambara ny tany misy hotakotaka ary hamoaka didy hitsivolana afaka ny hanankery avy hatrany raha tsy misy lalàna soloiny. Mandresy lahatra ny mpanohana ny fanovana sy ny avy ao amin'ny Antoko Rariny sy Fampandrosoana (AKP) fa hanafaingana ny fanantanterahana ny fanapahan-kevitra raisina ao amin'ny firenena izany. Hofoanana ny toeran'ny Praiminisitra, izay manana ny fahefana lehibe indrindra araka ny lalampanorenana amin'izao fotoana izao.
Ry vahoakan'i Torkia manana ny fahefana ianareo
Fitsapa-kevi-bahoaka eto Torkia
“Miteny amin'izao tontolo izao ny harefon'ny demaokrasia manoloana ny fitapitaky ny mpandrendri-bahoaka ny tantaran'i Torkia” – @Elif_Safak mpanoratra tiorka
Hifoha ao amin'i Torkia vaovao isika rahampitso maraina na ho inona na ho inona valiny ary ho tahaka izao isika (mijoro mifanila ny mpifidy ny eny sy ny tsia).
Ho an'ny #TanindrazanaIray #FanefaIray #FirenenaIray #FanjakanaIray #ENY [ny safidiko] Tsy hisy intsony ny hitovy!
Raha mandresy ny fanentanana ny ‘Tsia’, dia tsy ho aroso [handrotsaham-bato] intsony ireo tolo-panitsiana ireo.
Tsy mifantoka amin'izay mety ho vokatra ihany ny fitsikerana ny fandrotsaham-bato, fa tsy ao anatin'ny toerana sy fotoana hanaovana izany fitsapa-kevi-bahoaka izany fotsiny izao i Torkia amin'izao fotoana izao.
Sehatra haino aman-jery miisa 200 no nakatona, maherin'ny 150 ireo mpanangom-baovao nampidirina am-ponja, ary efa nomena ny don-tandroka ny fiarahamonim-pirenena tamin'ny fanadiovana taorian'ny fikasana hanongam-panjakana, izay nahatery dia tery ny sehatra politika fanoherana an'i Erdogan.
Hatramin'ny 71.000 any ho any ny isan'ny olona natao famotorana taorian'ny fikasana hanongam-panjakana lazaina nataon'i Fethullah Gulen monina any Etazonia mpifanandrina amin'i Erdogan, raha 41.000 no nomelohina araka ny tantara vao haingana vokatry ny fanadiovana tao Torkia nolazain'ny New York Times. Nesorina tamin'ireo parlemantera mpanohana ny Kiorda, antoko HDP mpanohana ny demaokrasia ny zon'izy ireo tsy azo tsaraina ary eo am-piandrasana ny fitsarana azy ireo.
Ny lehilahy iray izay mbola misitraka ny fahalalahana miteny dia i Erdogan tenany. Herinandro vitsivitsy izay ny Tiorka no nanatri-maso ny filohany mampitaha ny Alemà sy ny Holandey amin'ny Nazi, niantso an'i Holandy ho repoblikan'akondro ary nitaky fanasaziana io firenena io taorian'ny fifandirana hafahafa sy mampanahy [mg] amin'ny zon'ny antokony hanao fanentanana ny ‘Eny’ any amin'ny firenena vahiny. Ny mifidy ny ‘Tsia’, hoy izy, dia mitovy amin'ny mifidy ny fampihorohoroana.
Maro amin'ny mpifidy ny ‘Tsia’ anefa no manaky fa na ho inona na ho inona valim-pifidianana, dia vao miandoha ankehitriny ny karazana fampihorohoroana vaovao, tarihin'ny fanjakana.